Maalin: Janaayo 3, 2019
Waqtiga Metro dhexdeeda ee Antalya
Muddadan oo ku taal Antalya, mashruuca isgoyska 27, kaasoo u muuqday Madaxweynaha Duqa Magaalada Menderes Türel, 675 milyan oo ginni oo is-goysyadan ah sanadkii, ayuu yidhi. Menderes Türel, Duqa Magaalada Antalya Metropolitan Municipal, wuxuu ku yaal xaafada Ermenek ee degmada Muratpaşa [More ...]
Calaamadaha Taraafikada Burburka ah ayaa lagu cusboonaysiiyay Manisa
Waaxda Gaadiidka Dawlada Hoose ee Manisa, si ay u siiso badbaadada wadista baabuurta iyadoo ku mataleysa degmada Saruhanli oo gabowday isla markaana baabi'isay calaamadaha taraafikada waqtiga. Dowladda Hoose ee Manisa, Saruhanli 'si loo xaqiijiyo amniga gaadiidka [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, oo ka digtay ka hortagga barafka soo dhawaada maalmo ka hor, ayaa feejignaan gashay, oo si guul leh ku qabatay imtixaankii adkaa ee ay la gashay dadaalkeeda ka dhanka ah barafka, kaasoo mararka qaar gaaro ilaa mitir 1 meelaha sare. [More ...]
Huawei waxay saxeexday Borotokoolka Iskaashiga Smart City ay la leedahay Dawladda Hoose ee Magaalada Metroun waxayna u soo bandhigtay soo bandhig weyn oo ku saabsan mawduuca. Duqa magaalada Zihni Kaahin ayaa yidhi, yolculuk Safarkani wuxuu Samsun u rogi doonaa magaalo caqli badan dadkiisana wax wanaajin doona. [More ...]
TOYOTA waxay noqotey kafaalasho gawaarida ugu weyn ee World Biin Marathon Championship iyo Kooxda Baaskiilka ee Magaaladda waxaa lagu qaban doonaa Sakarya 2020. Isagoo hadlaya ka dib xafladda saxiixa, Orhan Bayraktar wuxuu yidhi, uz Waan uga mahadcelineynaa TOYOTA taageeradooda. waxaana rajeynayaa [More ...]
Dhismeedka Rakaabka Rakaabaka Xarunta cusub ee dhalashada 2018 / 656126 ee Maamulka Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) oo leh xaddid xadidan oo ah 243.537,23 TL 307.984,51 TL iyo qiime ku dhow XNUMX TL [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka waxaa lasiiyay Shahaadada Maamulka Nidaamka Amaanka ee Xogta iyadoo loo eegayo heerka ISO / IEC 27001: 2013 heerka. ISO / IEC 27001: Gobolka oo fuliya daraasado faahfaahsan oo ku saabsan maareynta amniga macluumaadka gudaha xadka mashruuca u hoggaansan heerka 2013 [More ...]
Iyada oo hoggaanka u ah Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BTSO), mashaariicda UR-GE waxay sii wadaan inay kordhiyaan mugga ganacsiga ee SMEs sidoo kale waxay kordhiyaan kartidooda tababarka. Marka la eego baaxadda mashruucyada UR-GE ee loo habeeyey hoggaanka BTSO iyadoo lala kaashanayo Wasaaradda Ganacsiga [More ...]
New 'Stadium' Idle, sida 'Ropeway' Darphane!
In kasta oo garoomada cusub ee dawladda hoose ay isu beddelayaan meel dabayl ah, gaadhiga fiilada leh ee la siiyay waaxda khaaska ah ayaa u shaqeeya sidii mintyo. Iyadoo la raacayo hawsha sanadka cusub… Gaarigiisa fiilada Bursa wuxuu saaran yahay warbaahinta qaranka! Iyadoo la raacayo nidaamkii hore ee '20'S 2' ee qof walba 15-17 daqiiqado gudahood [More ...]
Shil gaari oo lagu qaaday Danmark, 8
Danmark, 8 waxaa lagu dilay shil tareen oo ka dhacay buundada Great Belt, oo isku xirta jasiiradaha Sland iyo Fyn. Booliska deenishka, 5 dhedig iyo 3 lab ah guud ahaan, 8 [More ...]
Muddadii Sare-Joogtada ah ee Bilawga ah
codsiyada Smart City ka leexinayn ee ay tusaale ahaan Gaadiidka Portal nidaam in bilaabay gudbo nolosha by Turkey degmada Denizli ayaa bixiyay Smart Stop nidaamka gaadiidka dadweynaha. Abaalmarinta Smart City ee Degmadda Denizli [More ...]
Mashaariicda Mashaariicada ee Magaallada Degmada Kayseri
Duqa Magaalada Kayseri ee Magaalada Mustafa Mustafaik, ayaa Kayseri siiyay macluumaad ku saabsan codsiyada magaalooyinka ee caqliga leh. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in magaaladan caqliga lihi aan lagu xusin Kayseri, Duqa magaalada Celik wuxuu carrabka ku adkeeyay inay ku fuliyaan dalabyada caqli galnimada ee magaalooyin dhowr ah. smart [More ...]
Waxbarashada khasabka ah ee Darawallada Minibus
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul; Basaska, tagaasida iyo wadayaasha adeega iskuulka waxay sii wataan tababarkooda darawalada baska. Tababbarka xilliyeed ee la siinayo darawalada adeegsanaya gaadiidka dadweynaha wuxuu ku qasbayaa darawalada baska. Istanbul [More ...]
Kor u qaadista Buundada Osmangazi waxay ku jirtaa ajandaha Golaha
Ku-xigeenka CHP Istanbul Ali Seker, 'Dhis-Operation-Transfer' oo ay sameysay buundada Osmangazi, boqolleyda kororka sicirka 43.6 Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa weydiiyay soo jeedin su'aal oo qoraal ah. Xike sameeyey [More ...]